Amapolisa ayeke uloyiko eMombasa, Kenya, andithi?
24/7 eTV BreakingNewsShow : Cofa kwiqhosha levolumu (ezantsi ngasekhohlo kwesikrini sevidiyo)
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Amalungelo abantu » Amapolisa ayeke uloyiko eMombasa, Kenya, andithi?
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • IKenya Breaking News • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Agasti 23, 2021
Eyenziwe kakuhle yiKenya Special Forces yayiyindumasi iphela ngesenzo samapolisa akhaliphileyo kwisikhephe saseLikoni eMombasa, eKenya ngoMvulo.
Indumiso yayingekho ngaphandle kweengcinga zelenqe ezibuza amapolisa nokuba kutheni intatheli yayikulungele ukubamba eso sigameko kwikhamera. Amapolisa eKenya afuna ukutyhalwa kunye noluntu lwasekuhlaleni. Eli bali lempumelelo linokuchaphazela ingxaki kunye nenkxaso yamapolisa kumagosa adibana nawo kwihlabathi liphela ngeli xesha lobhubhane.
Amapolisa aseKenya kwidolophu eselunxwemeni yaseMombasa abambe abarhanelwa abarhanelwa ngeli xesha lixakekileyo Isikhephe ukuwela, ndabuya ndabuya ndifumana imipu emibini yeAK-47, iifowuni kunye neembumbulu.
Ukuthunyelwa kwimibuzo ye-twitter kutheni intatheli yefoto ifumaneka ngokulula ukuze ibambe le bust.
Esi sehlo sivula ingxoxo ngokusebenzisana kwabahlali kunye nenkohlakalo yamapolisa ebangelwa yimeko ye-COVID-19. Olu tyekelo lwehlabathi.
Isikebhe saseLikoni yi Iphenyane eliwela inqanawa i-Kilindini Harbour, ndikhonza isixeko saseKenya iMombasa phakathi kwecala lesiqithi saseMombasa kunye nehlomela-dolophu laseLikoni. Iiferi ezimbini ukuya kwezine ezigqityiweyo ezinqamlezileyo zinqumla izibuko, zithwele indlela kunye neenyawo zendlela.
Ngokuka-Tripadvisor, iLilkoni yinto ekufuneka ibenamava kubakhenkethi xa betyelele indawo yaseMombasa eKenya.
Amapolisa aseMombasa, eKenya, abambe abamba abarhanelwa ababini kwizitrato ezinqamlezayo eLikoni ngentsasa yangoMvulo.
Bukela ividiyo ye-YOUTUBE enikezwe lilungu leBhodi yoKhenketho yaseAfrika. Sithintele ividiyo kubantu abadala ngenxa yokuba umxholo awubalungelanga abantwana.
Ngaphandle kwamapolisa afumana kwakhona imipu emibini ye-AK-47, iimagazini ezimbini, ocelemba nezixhobo ezahlukahlukeneyo. kunokubakho okuninzi kweli bali kwaye kutheni lavela kwaye lasombululwa ngamapolisa akhaliphileyo aseKenya ngendlela ebeliyiyo.
Kwisiganeko semizuzu emihlanu esibambe abahlali bengazi, amapolisa adubula emoyeni, avalela amehlo abarhanelwa, kwaye abafaka kwizithuthi zamapolisa.
Umhlali walapha ubuze kuTwitter: “Indawo kwindawo Isikhephe yatsala ingqalelo yam. Kwenzeka njani ukuba isinxibo esisebenza ngokufihlakeleyo, sikwazi ukubandakanya abezindaba ukuze sibabone besebenza? Ngaba babecinga ukuba babeka ubomi babo emngciphekweni kunye noluntu? Kukho into eyintlanzi eqhubekayo. ”
Omnye umntu wongeza wathi: “UHow iza amaqela eekhamera eendaba ebesele esizeni nokuba b4 eso sehlo? Ukanti, khange babenakho ukudutyulwa ukuze babone ubuso babanqolobi? ”
Umthombo wosasazo wasekuhlaleni uxele ukuba amapolisa asebenza ngolwazi alufumene emva kokubamba umrhanelwa osandula kubanjwa wobugrogrisi eMombasa, othe emva koko waveza iinkcukacha zolu hlaselo lucetywayo.
Ukuqhawulwa kweza emva kokuba urhulumente wase-US ekhuphe iingcebiso zokuhamba kubakhenkethi baseMelika abaceba ukutyelela iKenya ngenxa yomngcipheko wobunqolobi.
Aba babini babethutha izixhobo besuka kuLunga Lunga kwaye bewelela eMombasa, apho kurhanelwa ukuba babaceba ukuhlasela ufakelo lokhuseleko, ikakhulu isikhululo samapolisa.
Uxinzelelo lonyukile kwi Isikhephe saseLikoni ukuwela, isiphaluka saseMombasa, emva kwamapolisa alwa nobunqolobi ngokukhawuleza asebenza ngobuntlola, kwinkqubo yokumisa imoto eyayiza kukhwela isikhephe esasilindile ngeembumbulu ezingekho mthethweni.
Ukuqinisekisa ngesiganeko, uMququzeleli weNgingqi yoNxweme uJohn Elungata wathi aba babini bazokuncinwa ngemisebenzi ababecebe ukuyenza eMombasa.
I-RAW VIDEO: Babanjwa njani abarhanelwa babini yiRecce Squad kunye namaPolisa aChasene nobunqolobi e-Likoni-Ferry yejelo laseMombasa kwangoko namhlanje kunye nemipu yeAK-47 kunye neembumbulu. pic.twitter.com/N2UmEDzN0D
-Zakariya Suleiman (@ Sul5KE) Agasti 23, 2021
Amapolisa achaze ngakumbi ukuba abanye abantu bazakubanjwa.
Amalungu IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika uxoxe ngesiganeko esikwiQela le-WhatsApp le-ATB esithi: "Bebeceba ukuvuthela isikhephe ngale ntsasa, kodwa enkosi kuMkhosi oKhethekileyo wababamba."
Page 1 of 2 Edlulileyo Okulandelayo
Usebenza njengekhoboka iminyaka engama-20? Ugxothiwe!
Abantu baseMelika abacingi ukuba lolona bhubhani ...
Izikhokelo zeMpilo ezitsha ze-COVID-19 ze-Entebbe...
Indawo yeFacebook.com iyathengiswa: ICyberattack
I-Seychelles yoKhenketho kunye neQatar Airways yabelana ngoku ...
Uthando olutsha lwe-CNN lwe-Samsung: Kwaye luyahlawula!
Ngaba zizityebi kuphela eziya kukwazi ukufumana iiholide e...
Iimpompo zerhasi ezingama-90% zomile ngenxa yokuthenga uvalo
Ibhodi ye-IATA yeeRhuluneli ithi Pegasus Airlines CEO entsha ...
Amaqhawe e-WTN avela kumazwe ali-128 athanda iKenya: uHambo lweHlabathi...
Inqaku elitsha le-COVID Xa ubhabha eMelika ngama-20 ...
IVietnam iphinde yavula isiqithi sasePhu Quoc ukuba sigonywe ngokupheleleyo...
Ngubani ofuna umnikelo weedola ezili-1 zezigidi ze-COVID-19 ...
Ixesha elitsha le-ski laseYurophu lijinga emngciphekweni
Ubulula, uqikelelo kunye nezitshixo zokusebenziseka...
Umdlalo omtsha weKlasi yeSage ngoku uyafumaneka kwiNtlango emnyama...
I-Delta Airlines inyanzelisa i-gab spikes ngaphezulu kwe-COVID-19 entsha ...
I-LGBTQ + iinkokheli zokhenketho zihlangene e-Atlanta 'zosapho ...
I-brand ye-Cosmetics yaseKorea iVella ngoku iYandisa eJapan
I-Qatar Airways: Ilahleko ezisebenzayo ezantsi, umvuzo kwi ...
Ukuhamba ngaphandle kweVisa ukusuka ePalestine ukuya eSt Kitts naseNevis ...
I-St. Kitts & Nevis iphelisa izithintelo kuhambo lomoya ...
Isigwebo se-44 yezigidi zeedola: U-Hilton ufumene ukungakhathali kwiindwendwe ...
Abaphambukeli abagonywe ngokupheleleyo banokungena e-US beqala ...
I-Brinker International ipapashe i-Q1 2022 ekhethiweyo ...
Ngaba akukho Ndlu? Akukho zinkonzo? Yenza uhambo olukhulu kwakhona!
Iiarhente zokuHamba zase-US: Imithetho yokuhamba yamazwe aphesheya iyatshintsha ...
Idibaniso entsha yeNkuku yaseTexas Iyenza ibe nkulu eCambodia
Izizathu zokuba ufune iWebhusayithi yabarhwebi
I-anyanisi eluhlaza yonke ngoku iyakhunjulwa ngenxa yeSalmonella
Impendulo ye-UNWTO eKenya: Ngubani onokumisa lo Nobhala...
ILufthansa yongeza iijets ezine zeAirbus A350-900 ezintsha kwizithuthi
(NGAPHAMBILI) iCDC ikhuphe umyalezo ongxamisekileyo kuwo nawuphi na umMelika ...
IATA: Imithwalo yomoya yomhlaba wonke ifuna ukukhula kwendawo
Uphando lwezenzululwazi kwiArctic, iSitayile saseRashiya
IHawaii ivulwa kwakhona kubakhenkethi boKhenketho ngezoKhenketho entsha ...
Isikhokelo sakho esiKhawulezayo ekuCwangciseni i-Getaway eGeorgia ...
Iingcebiso ngezohambo zaseMelika zezMazwe ngaMazwe ...
Amaqabane ase-Italiya Fumana ulwazi olutsha lokuHamba oluvela eSeychelles
Uqikelelo olutsha lwe-UNWTO loNyulo olukhutshwe yi-WTN
Abantu abane babulawa, i-19 yenzakala kwisiqhwithi sase-Istanbul
I-WestJet ngoku ifuna ugonyo olupheleleyo lwe-COVID-19 kubo bonke ...
I-WTN ibiza i-OECD States ukuba ibuyekeze...
I-America ikhumbula amaxhoba angama-9/11 kwiminyaka engama-20 emva ...
ENew York ukuya eMadeira. Inqwelomoya yokuQala ngokuNgqo
Imibhiyozo emyoli njengoko iSeychelles ngoku igqithile kwi-2020 ...
IMINENGA EBHAYIBHILEYO: Eyona nqanawa inkulu yoMthwalo eMhlabeni
Uhlaziyo olutsha lweNASA ngokuQaliswa kunye nokuDocking kwe-SpaceX Crew...
Ngo-2021 uphando lwe-cybersecurity: Imibutho...
Iinqwelo moya zeDelta Air ezivela ePrague ziye eNew York
AmaFama aMhlophe: Isimangalo esitsha soCalucalulo oluHlehliswayo
Iindiza ezisuka eSharm el-Sheikh ukuya eMoscow Domodedovo ...
UKhenketho lwaseKerala: Coca iPali yaseChaliyar Paddle ngoku
Usihlalo webhodi yezoKhenketho e-Afrika eSenegal...
Iishelufu zeApple isicwangciso sayo esinempikiswano sokuskena ngasese ...
I-China kunye ne-Afrika iNtsebenziswano eyomeleleyo ekulweni i-COVID-19
I-Princess Cruises Emerald Ship ibuyela kwiLwandle oluPhakamileyo
Iimveliso zokwandisa isondo ezingagunyaziswanga ezithinjwe...
Inyikima eKrete | Inyikima eKarpathos: A ...
ISpain izakuhlala ishushu ngo-2022
Ukuphumla kulawulo uthi:
Oktobha 20, 2021 kwi-13: 36
umfanekiso weskrini شات صوتي شات عراق دريم شات العراق دردشة عراقية
UKhenketho lwaseSeychelles kuHlelo olutsha lwaseSpain lweDive Travel Show Novemba 30, 2021
Ukugcina ukubonakala kwayo kwi-Market Market, iqela le-Tourism Seychelles lalikho kwi-Dive show show 2021, eyenzeka ngoNovemba 20 ukuya kwi-21, i-2021 eMadrid.
Oyena Mvelisi weWare yokuhlambela Novemba 30, 2021
Indlu yokuhlambela yenye yezona ndawo zibalulekileyo kulo naliphi na ikhaya. Uninzi lwabantu luphumla apho kwaye banokuziva besengozini. Kungenxa yoko le nto le ndawo kufuneka ikhululeke, ithokomele kwaye ibe nesitayile.
Amalungelo kunye neziBonelelo zoMntwana osenkampini Novemba 30, 2021
Njengabazali, sihlala sixhalabele ukukhula kwabantwana bethu. Sisoloko sifuna ukubabona benezona ntlobo zibalaseleyo zezinto kangangoko sinako. Noko ke, isikolo asinakubafundisa yonke loo nto. Kukho amaxesha apho abantwana bethu kufuneka bafumane into ethile ngokwabo kwaye baqonde amandla abo. Yiloo nto kanye eyabangela ukuba kusekwe iKampu yaBantwana.
Amazwe angama-33 abhengeza ukuvalwa kokuhamba okutsha kunye nezithintelo Novemba 30, 2021
Ubungakanani bobungqongqo bolawulo lomda buhluka ukusuka kwilizwe ukuya kwelinye, kwaye amanye amazwe avala imida yawo ngokupheleleyo, ngelixa amanye eqinisa kuphela iiprothokholi zovavanyo lwe-COVID-19 emdeni.
Ityala elitsha lokuqala le-COVID-19 ye-Omicron yoxinzelelo eqinisekisiwe eJapan Novemba 30, 2021
Ukuvalwa kokufika kwamanye amazwe kuqale ngoLwesibini kwaye kuya kuhlala isithuba esingangenyanga enye, apho abemi baseJapan kunye nabaphambukeli abanesimo sokuhlala ababuya kwiindawo ezinomngcipheko omkhulu kufuneka bahlaliswe bodwa ukuya kuthi ga kwiintsuku ezili-10 kwindawo emiselwe ngurhulumente.
I-Airbus: Uphononongo olutsha lwe-100% lokukhutshwa kwamafutha ezithuthi lubonisa isithembiso sakwangoko Novemba 30, 2021
Iziphumo zolu phando ziya kuxhasa iinzame eziqhubekayo kwi-Airbus kunye ne-Rolls-Royce zokuqinisekisa ukuba icandelo lezomoya lilungele ukusetyenziswa kwe-SAF enkulu njengenxalenye yenyathelo elibanzi lokukhupha i-decarbonize kwishishini.
I-WHO ilumkisa ngokuqhambuka okutsha, i-US ilawula ukuvalwa Novemba 30, 2021
UMongameli wase-US ugxininise ukuba kusazothatha iiveki ezimbalwa ukubonisa ukusebenza kakuhle kwamayeza okugonya akhoyo ngokuchasene ne-Ômicron.
Indiza entsha esuka eDoha isiya eTashkent kwiQatar Airways Novemba 30, 2021
Le nkonzo intsha iza kwenza abakhweli ababhabha besiya nokubuya eTashkent bayonwabele unxibelelwano olungenamthungo ukuya kwiindawo ezingaphezu kwe-140, kubandakanya i-UAE, iSaudi Arabia, iIndiya kunye ne-US, ngesikhululo seenqwelomoya saseHamad eDoha.
Izongezo zeMpilo yoBuchule: Ngoku uYeka ukuncipha kwengqondo? Novemba 30, 2021
Enye yezona zibonelelo zibalulekileyo zezongezelelo zempilo yengqondo kukuba zinokunceda ukuphucula umsebenzi wokuqonda kunye nenkumbulo. Ezinye izongezo zezempilo zobuchopho zinenani lezondlo ezinceda ingqondo.
I-Caldlor ivunyiwe kwi-Pre-Surgery Relief Novemba 30, 2021
Isithomalalisi seentlungu ezingezizo ii-narcotic ngoku singasetyenziswa kanye phambi kotyando ukwenzela ukuba izigulane zivuke kwinkqubo yazo kwiintlungu ezisezantsi kakhulu.
I-Oral Contraceptive ngoku Ifumana imvume Novemba 30, 2021
I-Mayne Pharma Group Limited kunye ne-Mithra Pharmaceuticals, i-SA (i-Euronext Brussels: i-MITRA) ibhengeze i-Therapeutic Goods Administration (TGA) ivume inoveli edibeneyo yokuthintela ukukhulelwa ngomlomo i-NEXTSTELLIS® (14.2 mg ye-esttrol kunye ne-3 mg drospirenone tablets). UMayne Pharma ulindele ukuqaliswa kwentengiso kwe-NEXTSTELLIS phakathi ku-2022 exhaswa yimfundo yentengiso yezempilo yezempilo ukusukela ngoJanuwari 2022.
I-China kunye ne-Afrika iNtsebenziswano eyomeleleyo ekulweni i-COVID-19 Novemba 30, 2021
I-China izakubonelela ngeedosi ezingaphezulu kwebhiliyoni enye yezitofu zokugonya i-COVID-19 e-Afrika, iqhube iiprojekthi ezili-10 zokuphelisa intlupheko kunye nezolimo, kwaye iqhube iinkqubo ezininzi ne-Afrika kwiindawo ezahlukeneyo, ubhengeze uMongameli Xi Jinping ngoMvulo xa wayethetha kumsitho wokuvula intlanganiso. ngekhonkco levidiyo.
Ikhwelo eliNgxamisekileyo le-WTN lokuba amazwe e-OECD abuyekeze uShishino loKhenketho lwaseAfrika Novemba 30, 2021
Ukwahlulwa kwamva nje kwamazwe aseMazantsi e-Afrika ngenxa yokwahluka kwe-Omicron esandula kubhaqwa yeCoronavirus kunamalungu oShishino lokuHamba noKhenketho lwase-Afrika akhathazekile kwaye anomsindo.
Amanzi AseMhlabeni: Ngaba Ngokwenene Avela Kuthuli Lwesiphekepheke? Novemba 30, 2021
Iqela lamazwe ngamazwe lezenzululwazi linokuthi lisombulule imfihlelo ephambili malunga nemvelaphi yamanzi eMhlabeni, emva kokufumana ubungqina obutsha obukholisayo obukhomba kumntu ongenakwenzeka - iLanga.
Iinqwelomoya: Ezona zilungileyo nezimbi kakhulu Novemba 30, 2021
Uphononongo oluhlalutya amava abakhweli aqhutywe nguBounce kwizinto ezifana nenkonzo, ukutya, intuthuzelo, kunye nokuzonwabisa, kunye nenani lezikhalazo kunye nesibonelelo somthwalo ophezulu, lubonisa ezona zibalaseleyo - kunye nezona zimbi - iinqwelomoya e-USA nakwihlabathi jikelele.